वार्ताको टुंगो छैन : डा. केसी ‘छिनछिनमा अर्धचेत’
बिहीबार रातिदेखि बेलाबेलामा अर्धचेत हुने समस्या डा. गोविन्द केसीमा देखिएको छ । मस्तिष्कमा राम्रोसँग रक्तसञ्चार हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो - डा. जीवन क्षेत्री
जुम्ला, असार ३० । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश–२०७४ अनुसार नै ऐन बन्नपर्नेलगायत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सात सूत्रीय माग राखेर पछिल्लो पटक १४ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिहीबार रातिदेखि थप जटिल बनेको छ ।
मस्तिष्कमा देखिएको समस्या कारण उनी छिनछिनमा अर्धचेत हुने गरेको जानकारी सहयोगी डा। जीवन क्षेत्रीले दिएका छन् । क्षेत्रीका अनुसार डा। केसीको मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार राम्रोसँग हुन नसकेका कारण यस्तो समस्या आएको खवर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
‘बिहीबार रातिदेखि बेलाबेलामा अर्धचेत ९चेतना कम० हुने समस्या देखिएको छ, क्षेत्रीले शुक्रबार भने, ‘मस्तिष्कमा राम्रोसँग रक्तसञ्चार हुन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो ।’ डा. केसीको शरीरमा अक्सिजन र ग्लुकोजको मात्रा पनि न्यून हुँदै गएको छ । ‘यी सबै कारणले मस्तिष्कमा असर पु¥याइरहेको छ,’ केसीले भने, ‘बिहीबार रातिदेखि स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएको छ।’
डा. केसी ‘छिनछिनमा अर्धचेत’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. केसीमा छाती देख्ने, कमजोरीले चक्कर लाग्ने, वाकवाकी हुने, पेट दुख्ने, पिसावमा बढी किटोनजस्ता समस्या देखिएको जानकारी क्षेत्रीले दिए । डा. केसीलाई संक्रमणको खतरा पनि देखिएको छ । उनलाई जुनसुकै बेला पनि सुविधासम्पन्न आइसियू उपचार सेवा चाहिने अवस्थ देखिएको पनि उनले बताए ।
वार्ताको टुंगो छैन
डा। केसीका माग सम्बन्धमा सरकार अहिलेसम्म गम्भीर बन्न सकेको छैन । केसीले सरकारसँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताए पनि सरकारले चासो नदेखाएको क्षेत्रीले बताए ।
‘अनशन र समस्या समाधानप्रति सरकार गम्भीर देखिएको छैन,’ डा. क्षेत्रीले भने, ‘अहिलेसम्म वर्ताको कुनै सुरसार छैन ।’ डा. केसीका माग र अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघले तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।
गीतकार विप्लव : जसका गीत सधै छन् चर्चाको शिखरमा
रामेछाप नगरकप भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलका खेल सम्पन्न
प्रेमी निक जोनस व्यस्थ भएपछि न्यूयोर्कमै जन्मदिन मनाउने प्रियंकाको योजना
सलमानको नाम बेचेर करोडौ ठग्ने सीमान्त गुरुङ पक्राउ
थप एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने देउवाको रणनीति
एशियाली खेलकूद महाकुम्भको उद्घाटन आज
सर्वाेच्च गेटवाटै ‘प्रकाण्ड’ पून पक्राउ
लुका मोड्रिचलाई लिएर दुई क्लबबीचको विवाद फिफामा पुग्यो
सर्वाेच्च्मा दुई कामु प्रधानन्यायाधीश !
दोरम्बा हत्याकाण्डको १५ बर्षः यस्तो छ अनुसन्धान समितिको रिपोर्ट (पूर्णपाठसहित)
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक राजपत्रमा प्रकाशित